Ny Intel Core i7-7700k dia mampiseho amintsika ny zavatra azony atao Vaovao momba ny gadget
Rehefa miresaka momba ny processeur isika dia azoko antoka fa amin'izao fotoana izao dia ho fantatrao hoe aiza, mihoatra na latsaka, ny fiafaran'ireo orinasa samihafa. Amin'ny raharahan'ny Intel dia mila miresaka momba ireo vita batemy isika toy ny Intel Core i7-7700k Farihy Kaby, ny processeur farany mahatratra ny tsena manaraka ny maritrano 14 nanometer miaraka amina maritrano misy toerana malalaka quad-core miaraka amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 4.2 GHz.
Miaraka amin'ity processeur ity dia manohy manamafy ny laharan-jotra Intel Core i7 i Intel, izay mandrafitra ny processeur tsara indrindra eran'izao tontolo izao, farafaharatsiny rehefa miresaka momba ny lafiny be indrindra amin'izy ireo isika. Toy izany ny tombotsoan'ny Intel Core i7-7700k vaovao izay, arak'ireo mari-pamantarana farany tafaporitsaka dia manana sary eo am-pamaranana ity lahatsoratra ity ihany ianao, fanatsarana hatramin'ny 40% mihoatra ny teo alohany.
Intel Core i7-7700k dia mampiseho fahombiazana ambony noho ny teo alohany, ny Intel Core i7-6700k.
Toy ny mahazatra dia notanterahina niaraka tamin'ny programa ny fitsapana Geekbench 4, kosa dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny sehatra. Mba handrefesana ny herin'ny mpanera, ity programa ity amin'ny ankapobeny no ataony dia ny fanaovana fitsapana marobe, mizara azy ireo Single Core (ho an'ny fototra tokana) ary Multicore, izay tsy maintsy hiasan'ny nukla rehetra. Amin'ireo tranga roa ireo, ny Intel Core i7-7700k dia nahavita be mihoatra ny teo alohany.
Na dia matetika aza ny fitsapana tokana dia tsy solontena, satria ny anton-javatra toy ny mari-pana amin'ny processeur na ny motherboard matetika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fampisehoana farany, ny tena izy dia ny Intel Core i7-7700k Kaby Lake 20% tsara kokoa amin'ny fitsapana Multicore ary miakatra 42% amin'ny fanandramana natao tamin'ny fototra tokana satria manomboka 16.000 ka hatramin'ny 20.000 4.300 isa ary 6.000 ka hatramin'ny XNUMX isa avy.
More Information: wccftech
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Hardware » Ny Intel Core i7-7700k dia mampiseho amintsika ny zavatra azony atao
Wow !!! Hery lehibe tokoa ao anaty sombin-javatra kely iray sy izay sisa tazana
Ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus dia nanaparitaka ny laharana AnTuTu